ကျွန် တော့ကိုလဲ အသိအမှတ် ပြုစေခင်ပါတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျွန် တော့ကိုလဲ အသိအမှတ် ပြုစေခင်ပါတယ်
ကျွန် တော့ကိုလဲ အသိအမှတ် ပြုစေခင်ပါတယ်
Posted by thar ag on Jun 24, 2012 in Copy/Paste | 24 comments
ကျွန်တော်ကတော့ ခုမှဘဲ စ၀င်တဲ့ တယောက်ပါ များသောအားဖြင့် အေးအေးနေတတ်ပါတယ် ကျွန်တော်က စတာနောက်တာတော့တော်တော်လေးကိုဝါသနာထူးပါတယ် ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းဘ၀ ကလာတဲ့သူတယောက်ပါ နောက်မှဘဲဝန်ထမ်းဘ၀လေးတွေေ၇းတင်ပါ့မယ် စတတ်တာလေး နောက်တတ်တာလေးတော့ ၇ွာသားတွေခွင်လွှတ်ပေးပါ ကျွန်တော့ကိုလဲနောက်ပါ စပါ စိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူး အစဉ် လေးစားလျှက်
စ ဆိုလဲ စရတာပ
အသစ်ကလေးဆိုတော့ ကျွန်တော်က စီနီရာပေါ့
ကဲတပည့်ကလေးရေ ဆရာလို့ ၁၀ ခွန်းခေါ်
၀န်ထမ်းဘ၀ ကလာတဲ့သူတစ်ယောက် ဆိုတော့
“စား” တတ်တာ အဲ “စ” တတ်တာ….တော်တော်လေးကိုဝါသနာထူးသကိုး။
၀န်ထမ်းဘ၀ က စားပုံစားနည်းတွေ များများရေးပြီး
နောက်လူတွေ ဒီလိုမစားအောင်ဘယ်လို ပြုပြင်သင့်လဲဆိုတာ အကြံပေးစေချင်တယ်။
The Best ရေ့ ကွန်မန့် လေးနဲ့ အကြံပြုချက် မိုက်တယ်ဗျာ။
လေးစားပါ၏။ကို သာအောင်လဲ စိတ်မဆိုးနဲ့ ဗျာ။အဲဒါက
ကျွန်တော်ကတော့ ခုမှဘဲ စ၀င်တဲ့ တယောက်ပါ
( ရွာသားအသစ်ကလေး အခုဘယ်စ၀င်မလို့လဲ အပေါက်မှားမယ်နော်)
စတတ်တာလေး နောက်တတ်တာလေးတော့ ၇ွာသားတွေခွင်လွှတ်ပေးပါ
(ရွာသားတွေကို ခွင့်လွှတ်ခိုင်းတော့ ရွာသူတွေက ခွင့်မလွတ်ရင်ဘယ်နှယ့်လုပ်မလဲကွဲ့
ကျွန်တော့ကိုလဲနောက်ပါ စပါ စိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူး
ကိုthar ag ရေ .. ကြိုဆိုပါတယ်နော် …
အတွေ့ကြုံနဲ့ အမြင်လေးတွေကို ဖလှယ်ရင်းပျော်ရွှင်စွာရွာလည်နိုင်ပါစေ
စတာ တွေေ၇ာစါးတာတွေရော စုံလို့ပါဘဲ ၀န် ထမ်းဆိုတာ ၇တဲ့ငွေလေးကို လောက်အောင်ငှ အောင်သုံးနေရတဲ့ ဘ၀လေးတွေပါ အပြင်ကလူတွေလိုမဟုတ်ပါဘူး သုံးစရာမရှိ တော့ဘဲ ဘိုင်ပြတ်လာတဲ့အချိန်မှာ တော့ စားပေါက်ကို ၇ှာတော့မှာပေါ့ သူဌေးဖြစ် လောက်အောင်စားနေသူတွေလဲ အများကြီးတွေ့နေ၇ပါတယ် ဒီထဲမှာ ကျွန်တော် တော့ မပါပါ ဘူး အင်းကိုယ် ကစမနောက်ခင် သူ များနောက်တာတော့စခံနေရပြီ အားလုံးဘဲ ပျော်ပျော်ပါးပါး ပါဘဲ
ကိုသာအောင်က သူဌေးဖြစ်လောက်အောင် စားလို့မရဘူးဆိုတော့ အောက်ခြေအဆင့်လောက်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
မိသားစု ထမင်းဝယုံလောက် စားလို့ ရနေသေးရင် မဆိုးသေးပါဘူးဗျာ။
“အမြင်တော်” ( ဥမပါ စကီအလန်းလေးတွေ ဘာညာသာရကာ ) တာလေးတွေပါ မြန်မကြာရေးတင်ပေးဘာ
၀န်ထမ်းဆိုတော့ ဘာတွေကိုများဝင်ဝင်ပြီးထမ်းပါလိမ့်။ အရဂါးရှဒါနော်။ ရှိတ်ရှိုးရဘူး။ [:p]
လို့ အော်ဟစ်ခေါ်လိုက်ရင် မောင်ရင်က ” ဗျို ဗျို ဗျို ဗျိုး”
မတွေ့တာတောင် ကြာပေါ့.. နေကောင်းတယ်မလားဟ
အေး ကလေး တကျိတ်နဲ့ အိမ်မှာ ဂျာလပတ်ရမ်းပီး ကျန်ခဲ့တယ်ပေါ့..
စတာ နောက်တာ ဝါသနာ ပါရင် ဟာသလေး တွေ တင်ဗျာ ! ကြိုဆိုပါတယ် !
ကိုပေကြီးကတော့ အလန် ဇယားတွေတော်တော် ကြိုက်ပုံ၇တယ် နော် သူများဝန်တွေကိုထမ်း၇လွမ်းလို့ အရပ်ကလဲပု ခါးကလဲကိုင်း မျက်စိကလဲပျာ ဆိုတော့ အိမ်ကမိန်းမကြီးဆို၇င်တော့ မမြင်ဘူး စကီလေးတွေဆို၇င် တော့ အဝေးကြီးက ကိုမြင်တယ် ဗျ အလန်းတွေပုံ တော့ တင်ရဲ ပါဘူး တော် ကြာသူ ကြီး နှစ်လုံး ပြူး ကြီးကကြောက်စ၇ာ ကြီးဗျ သားသား ကြောက်ကြောက်
စ လည်း စပါမယ်။
ကိုသာအောင်ရေ…………… မင်္ဂလာပါနော်။ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ၀န်ထမ်းဘ၀အကြောင်းလေးတွေကို ဖတ်ဖို့ စောင့်မျှော်နေပါ့မယ်။
ရှေ့ ဆက်ရမဲ့ ခရီးတွေမှာ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အစစ အရာရာ အားလုံး
အခုထက် “ သာ ” ပြီး “ အောင် ” မြင်ပါစေ။
စနိုးထက်တောင်နောက်ကျပါလား ကြိုဆိုပါတယ်နော် စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့မန်းဂေဇက်ရွာမှာ စိတ်ချမ်းသာကိုယ့်ကျန်းမာစွာနဲ့ မန်းသူ/သားတွေ ပျော်ရွှင်စွာ နေနိုင်ပါစေ စာများလည်းရေးသားတင်ပြနိုင်ပါစေ။